China CypB famahanana kapila habe fanamboarana sy fanamboarana | Fitaovana fanamaivanana Chengxin
CypB series feeder disk kuantitative dia karazana fitaovana famahanana volumetric misy famahanana mitohy. Izy io dia apetraka ao amin'ny famoahana ireo fitaovana fitehirizana toa ny silo, silo ary fitoeram-bary.
CypB series feeder disk kuantitative dia karazana fitaovana famahanana volumetric misy famahanana mitohy. Izy io dia apetraka ao amin'ny famoahana ireo fitaovana fitehirizana toa ny silo, silo ary fitoeram-bary. Noteren'ny mekanisma fiasan'ny feeder kapila eo ambanin'ny tanjaky ny fitaovana izy io, ary ampidirina amin'ny fitaovana manaraka tsy tapaka ary milamina. Rehefa tsy miasa intsony izy dia afaka mitana ny andraikitry ny fanidiana lamba. Izany dia dingana famokarana mitohy fitaovana manan-danja.
CypB series feeder disk kuantitative dia karazana feeder disk vaovao azo itokisana, avo lenta ary mahavonjy angovo, izay namboarina sy novokarin'ny orinasanay noho ny fandevonan-kanina sy ny fitrandrahana ny haitao mandroso vahiny ary ny fampifangaroana ny tena zava-misy any Shina. Mandroso sy mandanjalanja kokoa ny firafiny. Manana ireto toetra manaraka ireto izy:
1. Ny fitaovana dia mandray rafitra fanohanana rotary lehibe misy savaivony, miaraka amina fahaiza-mitondra lehibe sy fiasana miorina.
2. Ny mekanisma fandefasana dia mampiasa fifindran'ny nify mafy, izay manana fahombiazan'ny fampitana avo sy androm-piainana maharitra. Ny reducer sy ny motera dia apetraka eo ambanin'ny kapila, ary ny rafitry ny fitaovana iray manontolo dia mifintina.
3. Ny fitaovana dia manana rafitra famehezana tsy manam-paharoa, ny ampahany mampita dia nohosorana tsara ary nasiana tombo-kase, ary tsy misy raharaham-bahiny miditra amin'ireo faritra manosotra, mba hahazoana antoka fa afaka miasa tsy misy kilema ireo fitaovana ireo.
4. Ny lalàna mifehy ny hafainganam-pandehan'ny fiovam-po dia mandray ny maody fanaraha-maso ny fiovan'ny haitao miovaova, izay misy torolàlana mitondra fiara lehibe, fatra fanitsiana ary famerana mazava tsara.
5. Ny rafitra mihidy feno dia raisina amin'ny fizotry ny fitaovana, izay mitarika amin'ny fitantanana ny fahadiovana ao amin'ilay tranokala ary miteraka tontolo iainana mahasalama.
6. Ny rafitra maodely sy azo esorina dia raisina ho an'ny vatan'ny fitaovana sy ny tanany tsy misy lamba hahitana fahatapahana haingana sy fivoriambe eo an-toerana. Ny toerana fametrahana ny fivoahana dia azo fidina amin'ny sitrapo ao anatin'ny degre 180, izay mahatonga azy io ho mora ampiasaina kokoa.
masontsivana teknika ：
Savaivony kapila fampisehoana Famakiana t / h Mamaritra ny refin'ny bandwidth bandwidth mm
CYPBφ1600 10 ~ 100 ≤650
CYPBφ2000 20 ~ 200 ≤800
CYPBφ2200 25 ~ 250 ≤800
CYPBφ2500 30 ~ 300 ≤1000
CYPBφ2800 40 ~ 400 ≤1200
CYPBφ3000 50 ~ 500 ≤1200
CYPBφ3200 60 ~ 600 ≤1500
CYPBφ3600 90 ~ 900 ≤1600
Previous: Fehikibo, mpamatsy rojo
Manaraka: Czg feeder mihombo avo roa heny
Mpihinana kapila mihidy
Mpanamboatra feeder disk
Sary mpamahana kapila
Vidin'ny mpamahana kapila
Feeder kapila mitsangana